Sida loo abuuro block ah Microstation (Cell) - Geofumadas
Sida loo abuuro block a in Microstation (Cell)
Oktoobar, 2011 AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Microstation-Bentley
Microstation waxaa lagu magacaabaa unugyada (unugyada) inkastoo mararka qaarkood aan maqlay in sidoo kale loo yaqaanno unugyo. Maqaalkani waxaan arki doonaa sida loo sameeyo iyo caqligalka oo ka dhigaya inay ka duwanyihiin xayndaabka AutoCAD.
1 Si aad u isticmaasho unugyada
Si ka duwan GIS, halka ay calaamaduhu ka socoto meel ka mid ah dhibcaha iyo sifooyinka, CAD waa in ay ahaataa walxaha lagu dhejiyo joometeriga sida:
Qorshayaasha dhismaha ee 2D: calaamadaha rasmiga ee musqulaha, saxanka, nalalka, meelaha korontada, dhirta, iwm.
Khariidadaha dhulka: calaamadaha dhismaha dadweynaha, buundada, kaniisadda, xarunta waxbarashada, iwm.
Kiisaska kale ee caadiga ah badanaaba waxay ku xiran yihiin khariidada, taas oo lagu hagaajinayo cadeyn gaar ah oo faahfaahinaysa mas'uuliyadaha qofka fuliyay mashruuca.
2 Sida loo dhiso unugyada Microstation
Aan u maleyno in tirada sare ay tahay block ah oo aan dooneyno inaan abuurno. Waa shey mashiinka 1: 1,000 warqad 24 "36".
dulmar guduudan wuxuu u dhiganta tan sheet qiyaasta 1: 1,000 (609.60 914.40 mitir mitir), ka dibna aad meel qaaday sida ay xadad of plotter iyo ayaa barbaro gashay gudaha module la halyeeyada loo baahdo.
Dhibco guduudan waa dhibicda aan ku galo, sababtoo ah vector-ka kaas oo ah xNUMX: 1 waa sax gudaha ah, oo aan ku sharaxi doono maqaal mustaqbalka ah markaad ka hadashid sida loo abuuro qaabka daabacaadda adoo isticmaalaya Microstation.
Waxaan dooranaa sheyga aan dooneyno inaan sameyno block ah, oo aan ku jirin sanduuqa dib u casaanka ah.
Guddiga maareynta unugyada ayaa la hawlgeliyaa. Taas awgeed, haddii ay dhacdo Microstation 8.8 waxay haysaa cidhiidhi iyo xayawaan; marka la eego Microstation V8i, badhanka saxda ah ayaa la riixayaa waxaana la dooran karaa in la doorto sida barxan leh.
Booska ayaa marka hore la doortaa ka dibna raadinta baaxada.
Tani waxay keeni doontaa in guddi ka mid ah maktabadaha xannibaadda lagu soo saaro.
Maktabad nooca .cel-ka ah ayaa la abuuray, tan ayaa loo marayaa Faylka / cusub. Haddii aanu hore u haysanay maktabad, waxaa lagu soo rogaa Faylka / Ku lifaaq.
Marka xigta, waxaan u baahannahay inaan kuu sheegno meesha ay asal ahaan ka soo jeedaan xayndaabkeenu, taas oo noqon doonta dhibic galinta marka aan wacno.
Tan waxaa loo sameeyaa iyadoo la adeegsanayo amarka afraad ee ku yaala bararka unugyada, oo riixaya dhinaca geeska hoose ee UTM, sida lagu muujiyey garaafka.
Laga soo bilaabo waqtigan, badhanka "Abuur" ayaa la furfuray.
Waxaan magacaabnaa block ah, kiiskan Marco1000 iyo sharaxaadda Marco 1: 1,000. Eeg in aad horey u soo koobi kartid.
3 Sida loo xareeyo unugyada hadda jira
Si aad iyaga ugu wacdid, laba jeer waxaad riixdaa barta naga xiiseyneysa, waxaanan diyaar u nahay in la geliyo, iyada oo xulasho lagu dooranayo qiyaasta, wareegga iyo meesha dhibcaha.
Haddii aad rabto in aad ku dhejiso xayndaabyada jira, AutoCAD waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso xayawaanka ku jira faylka dxf / dwg waxaana lagu sameeyaa amarka Xarunta Designka.
Microstation waxay u oggolaataa qaabab badan:
Buugagga yaryar ee mashiinka (.cel iyo .dgnlib)
Faylasha CAD (.dgn, .dwg, .dxf)
Faylasha GIS (.shp, .tab, .mif)
Noocyo kale (.3ds, .obj, .3dm, .skp, .impx)
Si aad u aragto qaybaha la heli karo ee faylka, dooro "Dhamaan unugyada waddada", waxaad sidoo kale u soo qaadan kartaa faylka sida block.
Si aad uqortaan faylka, isticmaal khadka taleefanka, adoo dhaqaajinaya xulashada unugga.
Si aad u soo dejiso maktabadaha maktabadaha ee hadda jira akhriso maqaalkan iyo in lagu badalo Noocyada AutoCAD illaa unugyada Microstation tan kale.
Post Previous«Previous Congress of Land Management iyo Surveying
Post Next Microstation: Daabac Khariidadaha KhariidadahaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Sida loo abuuro block ah Microstation (Cell)"
Ishacyaah isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2018 at
Sideen wax uga beddeli karaa / wax uga beddeli karaa unug hore loo abuuray?